Yakovlev Yak-18T nlereanya ka FS9. -Agụnye ezigbo Ọnọdụ, 2D panel na animated propela, gauges, ụda set, omenala odida usoro, 4 dị iche iche animated visual ụdị, n'ụzọ zuru ezu arụ orụ na animated Virtual kokpiiti, 5 dị iche iche textures.
Yakovlev (Russian :. ОКБ им Яковлева) bụ a Russian ugbo elu emeputa. The nganiihu nke nnyocha ngalaba bụ Yak. The imewe ụlọ ọrụ tọrọ ntọala site na Alexander Sergeyevich Yakovlev na 1934 n'okpuru aha nke OKB-115.
Yakovlev The aha na-eji mba nke mbụ Eastern Bloc n'ebe ọdịda anyanwụ, ma na Russia a aha na-shortened Yak (Russian: Як) sotere aha nke ụgbọelu. (Wikipedia)
Onye edemede: Alexey Yuzefov